Proteinina, proteinina, proteinina. Mila proteinina ny tsirairay. Fantatsika rehetra fa amin'ny andro dia tsy maintsy mihinana sakafo ampy misy proteinina isika.
Ahoana anefa raha tsy azonao antoka hoe firy no nihinanao an'io androany io? Amin'ity tranga ity dia mila mamaky ireto soritr'aretina manaraka ireto ianao, ny fisehoan-javatra izay midika fa mila manamboatra milina mena ianao amin'ny mofomamy (raha omnivore ianao) na chickpeas (raha vegan ianao).
1. Mialà sasatra
Ny ambany dia ny fifantohana ny proteinina ao amin'ny rà, ny haingana kokoa ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny rano, izay miteraka fahatsapana, oda ao amin'ny faritry ny tongotra, kitrokely, tava, tanana ary kibo.
2. Miseho ny dyspnea
Raha tsy ampy proteinina ianao, dia tsy ny anemia ihany no mety hitranga, fa ny faharetan'ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo, ny fitabatabana, ny tsy fahampian'ny angovo.
3. Tsy afaka nihinana
Voamarikao ve fa mahatsiaro noana ve ianao aorian'ny voankazo (voankazo, cookies)? Raha ny marina, ny ankamaroan'ny olona dia manana tsindrona - vokatra izay tsy manan-karena fa tsy proteinina, fa amin'ny kôbio hydrate ary matetika tsotra (ohatra, ilay soavon-tsakafo mitovy). Ny sakafo ara-tsakafo dia manolo-kevitra ny hametraka ao anatin'ny boaty an-kibon-dranomamy misy barazy misy sotrokely, siramamy saka, 50 g voaniho, 2 setroka avy amin'ny voanjo (na alika hafa), voankazo na voankazo vitsivitsy - amin'ny farany dia mahazo snacks mitombina, izay tsy nohaninareo ela te hihinana.
4. Mangetaheta zava-mamy
Ary aza mieritreritra toy izany, fa toa aminao ihany fa raha tsy mihinana zava-mamy ianao amin'izao fotoana (na eo anelanelan'ny 15-16: 00), dia hahatsiaro ho reraka sy tsy sambatra ny andro sisa. Ny mpanazatra azo antoka ho an'ny sakafo mahasalama, Rebekah Gahan, dia manazava ny faniriana mafy toy izany ho an'ny zava-misy fa ny vatan'olombelona sy ny toy izany dia mitaky ny hampihenana ny siramamy amin'ny rà. Mba hisorohana na hamongorana izany, ny sakafo rehetra dia tokony misy proteinina.
5. Aza kivy rehefa avy mihinana
Fantatrao ve ny antony? Marina izany, raha tsy misy proteinina. Azo inoana fa betsaka ny voamadinina sy ny fatao ny sakafo ananananao, saingy adinonao ny proteinina. Ankoatra izany, ity lela ity dia navesatra ho an'ny vatanao. Ohatra, ny sakafo maraina dia mety ahitana mofo vita amin'ny varimbazaha, atody lava, yogora, voankazo ary menaka tantely.
6. Ny ratra dia manasitrana ela
Fantatry ny rehetra fa mamerina ny tazomoka ny proteinina, manampy azy ireo haingana kokoa. Raha lany ny proteinina, dia mora kokoa noho ny mahazatra ny fomba fanasitranana.
7. Miala ny volony
Voamarikao ve fa taorian 'ny fanasana tsirairay, ny famafazana ny volony? Ankoatra izany, very ny lokony voajanahary izy ireo ary nanjary maina? Mipoitra izany fa ny proteinina dia mila proteinina mba hampatanjaka sy hitombo. Raha tsy izany, dia lasa mihamangatsiaka izy ireo ary lasa reraka.
Raha tsy ampy proteinina ny vatanao, dia mety ho marary matetika ianao. Mba hahitana raha izao no izy dia manomboka mihinana sakafo misy proteinina hafa. Adinoy hoe inona ny hatsiaky ny hatsiaka? Noho izany dia mila proteinina kely bebe kokoa ny tsy fahampian-tsakafoo.
9. Ny hoditra maina sy malefaka
Tsy misy mpangalatra, fingotra ary scrubs manampy amin'ny fanandramana tsara ny hoditra? Matetika, ny antony dia mitoetra ao anatin'ny tsy fahampian'ny rano mamo ny andro iray (ary manala tanteraka ny hoditra) ary mihinana proteinina.
Ireo akanjon'ny vehivavy winter 2014-2016
Kristen Stewart sy Taylor Lautner
Inona no vitamina ao anaty paoma?
30's Hairstyles of Chicago
Nahoana no mandainga ny lehilahy?
Adriana Lima ao anaty sarina sary vaovao momba ny marika Calzedonia
Voninkazo manomboka amin'ny perla mankany Paska
Fombafomba simoron ho an'ny vola
Fanatanjahantena ho an'ny vehivavy bevohoka ao amin'ny dobo